1. Ny orinasa dia manana lehibe, an-trano mandroso fanariana fitaovana fanodinana mba hiantohana ny hery sy ny kalitaon'ny castings sy ny kalitaon'ny famatsiana faobe dingana.
2. Advanced sy feno akorany plastika sy ny singa tsindrona sy ny maty-fanariana fitaovana miantoka ny kalitaon'ny plastika fipoahana-porofo elektrika fitaovana sy ny jiro.
3. Ny fitaovana fanodinana mekanika mandeha ho azy sy ny fitaovana fanodinana manokana novolavolain'ny tenany dia miantoka ny fahamarinan'ny fanodinana ny vokatra elektrika tsy misy fipoahana sy ny fepetra takian'ny mari-pamantarana tsy misy fipoahana;Ny fitaovana sy ny teknolojia avo lenta dia afaka mampihena ny vidin'ny famokarana ary mifehy ny kalitaon'ny famokarana faobe.
Fahalalana tsy mipoaka
01. Ohatra famantarana famantarana tsy mipoaka
Fotoana famoahana: 2021-08-19
02. Ny haavon'ny fiarovana ny fitaovana
03. fototry ny teknolojia tsy mipoaka
04. Karazana fitaovana elektrika tsy mipoaka
05. Fizarana toerana mampidi-doza
Fametrahana vokatra sary
01. Fametrahana vokatra sary
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina amin'ny fitaovana elektrika tsy misy fipoahana, ny vokatra omenay ny mpampiasa dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpampiasa sy mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly.
Ny serivisy aorian'ny varotra toy ny fampiasana sy fametrahana ny vokatra amidy, ny fikojakojana ary ny fanaraha-maso dia andraikitsika sy adidintsika;noho izany, hanao izay tsara indrindra vitantsika izahay mba hanao fanohanana ara-teknika, fanaraha-maso kalitao ary serivisy aorian'ny varotra hafa ho an'ny mpampiasa.
Manome fanohanana ara-teknika ho an'ny vokatra Feice feno, anisan'izany ny fifampidinihana momba ny vokatra, ny fifantenana ny vokatra ary ny famahana olana, sns.
Manome fanohanana ho an'ny mpivarotra Feice sy ny mpanjifa amin'ny fitaovana mahafeno fepetra, fanontaniana an-telefaona ary fampahalalana mifandraika amin'ny fividianana vokatra
Fitarainana sy soso-kevitra
Feice dia manan-danja lehibe amin'ny fanangonana ny fitarainana sy ny soso-kevitry ny mpanjifa, ary hanana olona manokan-tena handrakitra sy hanara-maso ny dingana manontolo mba hahazoana antoka fa voakarakara tsara ny fitarainana sy ny soso-kevitra rehetra.